Galaxy Andromeda: njirimara, mbido na nhazi | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 03/08/2021 10:36 | Astron
Andromeda bụ ụyọkọ kpakpando nke nwere sistemụ kpakpando, uzuzu, na gas, nke na -emetụta ike ndọda. Ọ dị nde afọ 2,5 site na ụwa wee bụrụ naanị ihe dị na mbara igwe nke anya gba ọtọ nke na -abụghị nke Milky Way. Ndekọ mbụ nke ụyọkọ kpakpando ahụ malitere na 961, mgbe onye na-enyocha mbara igwe Peasia Al-Sufi kọwara ya dị ka obere ụyọkọ igwe ojii na otu Andromeda. O yikarịrị ka ndị obodo ochie ndị ọzọ jisiri ike mata ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Galaxy nke Andromeda, njirimara na mkpa ya.
2 Otu esi eji anya nke uche hụ ụyọkọ Andromeda
3 Nhazi na mbido ụyọkọ kpakpando Andromeda
Andromeda bụ ụyọkọ kpakpando gbara okirikiri nke ọdịdị ya yiri Milky Way anyị. Ọ na -adị ka diski dị larịị nke nwere mgbagharị na ọtụtụ ogwe aka gburugburu n'etiti. Ọ bụghị ụyọkọ kpakpando niile nwere atụmatụ a. Hubble hụrụ ọtụtụ narị n'ime ha. N'ime eserese ndụdụ ndụdụ ha ama ama ma ọ bụ usoro Hubble nke a ka na -eji taa, e kewara ha na ellipticals (E), lenticulars (L), na spirals (S).
N'aka nke ya, a na -ekewa ụyọkọ kpakpando ndị na -agba gburugburu ụzọ abụọ, ndị nwere ogwe etiti na ndị na -enweghị osisi etiti. Nkwenye ugbu a bụ na nke anyị Milky Way bụ ụyọkọ kpakpando gburugburu Sb. Agbanyeghị na anyị enweghị ike ịhụ ya site na mpụga, Andromeda bụ ụyọkọ galab gbara gburugburu Sb dị mfe ma ọ bụ na -enweghị mgbochi, ọ fọrọ nke nta ka anyị hụ ya ebe a.
Ka anyị hụ njirimara Andromeda kachasị mkpa:
Ọ nwere ọnụọgụ abụọ
Ogo ya dị ka nke Milky Way. Ogo Andromeda pere mpe, mana Milky Way nwere oke buru ibu na ihe gbara ọchịchịrị.
Enwere ọtụtụ ụyọkọ ụyọkọ satịlaịtị na Andromeda na -emekọrịta ihe site na ike ndọda: elliptical dwarf galaxies: M32 na M110 na obere ụyọkọ kpakpando M33.
Dayameta ya bụ afọ 220.000 ọkụ.
Ọ na -enwu gbaa okpukpu abụọ ka Milky Way ma nwee ijeri kpakpando.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3% nke ume Andromeda na -ewepụta dị na mpaghara infrared, ebe maka Milky Way pasent a bụ 50%. Ọtụtụ mgbe ọnụ ahịa a na -emetụta ọnụego kpakpando, yabụ na ọ dị elu na Milky Way na ala na Andromeda.
Otu esi eji anya nke uche hụ ụyọkọ Andromeda
Ndepụta nke Messier bụ ndepụta nke ihe dị na mbara igwe 110 malitere na 1774, nke na -akpọ ụyọkọ kpakpando Andromeda a na -ahụ anya na otu kpakpando M31. Cheta aha ndị a mgbe ị na -achọ ụyọkọ kpakpando na map mbara igwe, ebe a na -eji ha n'ọtụtụ ngwa mbara igwe na kọmpụta na ekwentị.
Iji jiri anya nke uche hụ Andromeda, ọ dị mma ibu ụzọ chọta ụyọkọ kpakpando Cassiopeia, nke nwere ọdịdị pụrụ iche nke mkpụrụedemede W ma ọ bụ M, dabere n'otú i si ele ya anya. Cassiopeia dị mfe iji anya nke uche hụ na mbara igwe, na Andromeda Galaxy dị n'etiti ya na ụyọkọ kpakpando Andromeda. Cheta na iji anya gba ọtọ wee hụ Milky Way, igwe ga -agba ọchịchịrị nke ukwuu na enweghị ọkụ ọkụ dị nso. Agbanyeghị, ọbụlagodi n'abali doro anya, enwere ike ịhụ Milky Way site na obodo ndị mmadụ juputara na ya, mana opekata mpe enyemaka enyemaka anya. N'okwu ndị a, obere oval ọcha ga -apụta na mpaghara egosipụtara.
Site na iji teliskop ị nwere ike ịmatakwu nkọwa nke ụyọkọ kpakpando a ma nwee ike ịchọta ụyọkọ ụyọkọ kpakpando abụọ ya.
Oge kacha mma n'afọ ịhụ ya bụ:
North Hemisphere: Agbanyeghị na visibiliti dị ala n'ime afọ, ọnwa kachasị mma bụ Ọgọst na Septemba.
Southern Hemisphere: n'etiti October na December.
N'ikpeazụ, a na -atụ aro idobe n'oge ọnwa ọhụrụ, mee ka igwe gbaa ọchịchịrị ma yi uwe kwesịrị ekwesị maka oge.
Nhazi na mbido ụyọkọ kpakpando Andromeda
Ọdịdị Andromeda bụ otu ihe ahụ ụyọkọ kpakpando niile gbara okirikiri:
Ntọala atọm nwere oghere ojii buru ibu n'ime ya.
Bọlbụ gbara okirikiri ahụ ma jupụta na kpakpando na -aga n'ihu na mmalite.
Disk nke interstellar okwu.
Halo, nnukwu oghere gbara okirikiri nke akpọrọ aha ya, na -agwakọta na halo nke Milky Way dị nso.
Galaxies sitere na protogalaxies oge ochie ma ọ bụ igwe ojii gasị, wee hazie ha oge dị mkpirikpi mgbe Big Bang, na Big Bang kere eluigwe na ụwa. N'oge Big Bang, e guzobere ihe ndị na -adị mfe hydrogen na helium. N'ụzọ dị otu a, proto-galaxy nke mbụ ga-abụrịrị nke ihe ndị a mejupụtara.
Na mbụ, a na -ekesa okwu ahụ nha anya, mana n'oge ụfọdụ ọ na -agbakọta ntakịrị karịa na ndị ọzọ. Ebee njupụta dị elu, ike ndọda na -amalite ime ihe ma na -eme ka ihe ndị ọzọ gbakọba. Ka oge na -aga, nsụda ike ndọda mepụtara protogalaxies. Andromeda nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ọtụtụ protogalaxies nke mere ihe dị ka ijeri afọ iri gara aga.
N'iburu n'uche na afọ ole e mere atụmatụ na mbara igwe bụ ijeri afọ 13.700, Andromeda hibere obere oge Big Bang gasịrị, dị ka Milky Way. N'oge ịdị adị, Andromeda mikpuru protogalaxies na ụyọkọ kpakpando ndị ọzọ, na -enyere ya aka ịkpụzi ụdị ya ugbu a. Ọzọkwa, ọnụego kpakpando ha agbanweela ka oge na -aga, n'ihi na ọnụego kpakpando na -abawanye n'oge ndị a.
Ndị na -agbanwe Cepheid ha bụ kpakpando na -enwu enwu, na -enwu karịa anyanwụ, ka e wee nwee ike ịhụ ha ọbụna site n'ebe dị anya. Polaris ma ọ bụ Pole Star bụ ihe atụ nke kpakpando na -agbanwe agbanwe Cepheid. Njirimara ha bụ na ha ga -enwe mmụba na mgbachi oge, n'oge nke nchapụta ha ga na -abawanye ma na -ebelata. Ọ bụ ya mere a na -akpọ ha kpakpando na -ama jijiji.
Mgbe a na -ahụ ọkụ abụọ na -enwu n'otu ebe dị anya n'abalị, ha nwere ike nwee nchapụta dị otu ahụ, mana otu n'ime isi mmalite ọkụ nwekwara ike na -adịchaghị mma na nso, yabụ na ha yiri otu.
Ịdị ukwuu nke kpakpando nwere njikọ na -egbukepụ egbukepụ ya: ọ bụ ihe doro anya na ka ịdị ukwuu na -enwu, ka ọkụ na -akawanye ukwuu. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọdịiche dị n'etiti ịdị ukwuu pụtara na ịdị ukwuu dị na ya metụtara ịdị anya na isi mmalite ya.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ụyọkọ kpakpando Andromeda na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Galaxy Andromeda